Tuesday, 04.07.2020, 02:35pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 11.21.2011, 03:52pm
काठमाडौं । नवगठित किङ्गफिसर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था बौद्ध, काठमाडौंको प्रथम वार्षिक साधारणसभा गत शनिवार सम्पन्न भयो । संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार राई तथा संस्थापक सदस्य यादब देवकोटाको सभापतित्वमा समपन्न साधारण सभामा संस्थाको भावी रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा बृहद् छलफल भएको थियो ।
पूर्व आईजीपीद्वयको मुद्दा उल्टियो
Monday, 11.14.2011, 02:40pm
काठमाडौं । विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको भन्दै सफाई दिएका दुई पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू अच्यूतकृष्ण खरेल र मोतिलाल बोहराको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
छैठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
Monday, 11.14.2011, 02:36pm
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अस्ति आइतबार मधेशी मोर्चाबाट थप तीन जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेपछि मन्त्रिमण्डलको आधार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।
विद्यार्थीको संख्या यकिन छैन
Monday, 11.07.2011, 03:38pm
विद्यार्थीको संख्या यकिन नहुँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक हचुवाको भरमा छाप्ने गरेको बुझिएको छ ।
शरतसिंहको राजीनामा प्रकरणले खोजेको उत्तर : तारा सुवेदी
Monday, 10.24.2011, 02:56pm
शरतसिंह भण्डारी र प्रभु साहा दोषी हुन्, होइनन् ? त्यो ठहर गर्ने निकाय अन्तरिम संसद होइन, स्वतन्त्र अदालत नै हो । स्वतन्त्र न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार माथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद लगायत कुनै पनि संस्था, व्यक्ति, समाज र समुदायलाई छैन ।
अछाममा एचआइभीको डरलाग्दो चित्र
Monday, 10.24.2011, 02:55pm
अछाममा हालसम्ममा एचआइभी संक्रमितको संख्या एक हजार १७३ पुगेको बताइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अछामले दिएको तथ्याङक अनुसार जिल्लाभर रगत परीक्षण गराउने ३८ हजार पाँच सय १२ मध्ये सात सय ३४ जना महिला र चार सय ३९ पुरुषमा एचआइभी पोजेटिभ देखिएको छ ।
नेपाल–चीन व्यापार मैत्री संघको स्थापना
Monday, 10.24.2011, 02:51pm
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच कायम रहेको परम्परागत सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउँदै दुई मुलुकवीचको ब्यापारिक सहितको आर्थिक विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर नेपाल–चीन व्यापार मैत्री संघ नामको संस्थाको स्थापना भएको छ ।
तनावबीच लामिछाने सर्वसम्मत
Monday, 10.17.2011, 03:05pm
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको पाँचो विश्व सम्मेलन १७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो दिन नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणाका क्रममा दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न भएपछि केही समय रोकिएको सम्मेलनले गत शुक्रबार जीवा लामिछानेलाई निर्विरोध अध्यक्षमा चयन गरेको छ । अन्य पदका लागि भने मतदान भएको थियो ।
बस दुर्घटनामा ४२ को मृत्यु
Monday, 10.17.2011, 03:03pm
काठमाडौं । सिन्धुली जिल्लाको पुरानो झाँगाझोली–६ स्थित रिठ्ठे भिरवाट असोज २६ गते विहान खचाखच यात्रु बोकेको दुर्घटना हुँदा ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गरेको ना ३ ख ९४१२ नम्बरको बस सो दिन विहान करिब साढे १० वजे दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा घटनास्थलमा ४० जना र अन्य दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
दक्षिण एसिया र चीनबीचको सम्बन्धबारे चर्चा
Monday, 09.19.2011, 02:42pm
चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको सम्बन्धका बारेमा जनस्तरबाट भैरहेका प्रयासको दोस्रो शृङ्खलाको रुपमा राजधानीमा गत शनिवार चीन दक्षिण एसिया मैत्री संठनहरूको दोस्रोे मञ्च सम्पन्न भएको छ । मञ्चको बुधबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उद्घाटन गर्दै दक्षिण एसियामा व्याप्त गरिबी घटाउन चीन र यस क्षेत्रका मुलुकहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि व्यापार, पर्यटन, यातायात, प्रविधि हस्तान्तरण, मानव संशाधन व्यवस्थापन, कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
वीर अस्पताल उठ्नै नसक्ने अवस्थामा
Monday, 09.12.2011, 02:50pm
काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा जेठा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक र कर्मचारीका अभावले सबै सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ८ वर्षदेखि अस्पतालले स्थायी कर्मचारी र चिकित्सक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
अपराधीलाई नछाडिने प्रधानमन्त्रीको दृढता
Monday, 09.05.2011, 01:24pm
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सो कुरा गत शनिवार ३२ जना अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको प्रतिउत्तरमा बताउनुभएको हो ।
घले गाउँमा पर्यटक बढे
Monday, 08.29.2011, 01:56pm
लमजुङ । सार्क राष्ट्रकै नमुना पर्यटकीय गाउँको रुपमा प्रख्यात लमजुङको घले गाउँमा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १४ हजार पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् ।
Monday, 08.22.2011, 03:13pm
शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न शिक्षकहरुको भूमिका नै बढी जिम्मेवार हुने कुरामा शिक्षाविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
मुक्तक प्रतियोगिताका विजयीहरूको नाम सार्वजनिक
Monday, 08.15.2011, 03:01pm
काठमाडौं । अन्तरङ्ग साप्ताहिकको आयोजनामा हुने दोस्रो राष्ट्रव्यापी मुक्तक प्रतियोगिताका पुरस्कृत स्रष्टाहरूको छनोट भएको छ । भदौको पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न हुने अन्तरङ्ग राष्ट्रिय साप्ताहिकको २० औं वार्षिकोत्सवको विशेष कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गर्ने तयारी भैरहेको आयोजकले बताएका छन् ।
» चर्चामा नरहेको चौथो गणतन्त्र दिवस
» किताब छपाइ सकियो, अभाव कायमै
» प्रदेशको आधार भूगोल
» फोरम फेरि फुटयो
Page 16/16: « :: ... 10 11 12 13 14 15 16